अफशोर बैंकिंग: किन साधारण व्यक्तिहरूले अपतटीय बैंक खाताहरू सेट अप गर्दछन्
अफशोर बैंकिंग र सम्पत्ति सुरक्षा
यो विश्वलाई दयालु स्थानका रूपमा सोच्न राम्रो लाग्दछ जहाँ तपाईं कहिले पनि कुनै कानुनी समस्याहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्न। जहाँसम्म, यदि तपाईं तथ्या study्कहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि त्यहाँ राम्रो मौका छ कि कुनै समयमा तपाईं आफ्नो हातमा मुद्दा हाल्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। एक भन्दा बढी। वकील जे मिट्तेनका अनुसार अमेरिकाका औसत व्यक्तिले उसको जीवनकालमा सातवटा मुद्दा हाल्छ। यसको साथ, एक बेइमान वकील आउँछ जो ईन्धन थप गर्दछ र तपाईंको समस्याहरूको ज्वाला फ्यान गर्दछ।
यो अझ सम्भावित मानिसहरु को लागी हुन्छ जो आफ्नै व्यवसायका मालिक छन्। त्यस्तै रूपमा, अप्रत्याशित मुद्दाहरू - सायद तपाइँको धन खोल्न को लागी बेकारका प्रयासहरू - कुनै पनि समयमा तपाइँको ढोकामा पुग्न सकिन्छ। अधिकांश व्यक्तिहरूका लागि एउटा कुरा निश्चित छ। यो मुद्दा गर्दैन कि एक मुद्दा एक व्यापार वा व्यक्तिगत मामला बाट आउँछ। यो एक तलाक, वा एक कर मुद्दा पनि हुन सक्छ। जब तपाईं अदालत मा हावा, तपाईं आफ्नो सम्पत्ति, वा कमसेकम केहि संरक्षित रहन चाहानुहुन्छ। त्यस्तै, धेरै फर्कन्छन् अपतटीय बैंकिंग जीवनमा त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण खतराबाट तिनीहरूको सम्पत्ति बचाउन उचित कानुनी उपकरणको साथ संयुक्त।
किन अपतटीय बैंकिंग?
त्यसोभए, किन व्यक्तिहरूले किन अपतटीय बैंक खाताहरू खोल्दछन्? संयुक्त राज्य अमेरिकासँग मात्र विश्वको population.२% जनसंख्या छ। यद्यपि यससँग विश्वका lawyers०% वकिलहरू छन् र विश्वव्यापी मुद्दाको%%% छ। त्यसो भए सम्पत्ति संरक्षण अमेरिकीहरूको लागि खेलको नाम हो किनकि यो उनीहरूको वित्तको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। अधिकांश व्यक्ति निजी पूंजीलाई देशबाट बाहिर सारिरहेका सम्पत्ति संरक्षणको अवधारणामा केन्द्रित छन्। साथै, उनीहरूले आफ्ना लाभहरू भावी सम्भावित खतराहरू - लेनदारहरू, अभियोगीहरू, र सम्बन्धविच्छेदहरूको रक्षा गर्न आवश्यक महसुस गर्छन्। धेरै जसो कानूनी आक्रमण अमेरिका भित्रबाट आउँछन्।
उनीहरूको कर भुक्तानी कम गर्न अफशोर खाताहरू पनि प्रयोग गर्छन्। यो प्राय: अन्य देशहरूबाट आउने कमाईमा हो। अमेरिकाले विश्वव्यापी आम्दानीमा आफ्ना मानिसहरूलाई कर दिन्छ। यद्यपि एप्पल र गुगल जस्ता कम्पनीहरूले अफशोरमा रकम फन्ड गर्छन् र जबरजस्ती कर बचतको आनन्द लिन्छन्। अमेरिका जस्तो नभई, केहि देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई विश्वव्यापी आम्दानीमा कर लगाउँदैनन्। सबैजनाले यसको फाइदा लिन सक्दैनन्, तथापि, पहिले इजाजतपत्र प्राप्त कर सल्लाह लिनुहोस्। फेरी, यो केवल एउटा आविष्कारको पखेटा नगर्नुहोस् तपाईको दिमागमा कर रणनीति "यो यस्तो हुनुपर्दछ"। लाइसेन्स प्राप्त कर सल्लाह लिनुहोस्।
सम्पत्ति सुरक्षामा भाग लिने व्यक्तिहरूको लागि, तिनीहरूले यी सम्पत्तिहरू प्राय: धेरै साना, स्वतन्त्र टापु-राज्यहरूमा एकमा राख्छन्। यी क्षेत्रहरूले अफशोर बैंकिंग सेवाहरूको लागि इच्छुक विदेशीहरूको बजार फेला पार्दछ। यि धेरै देशहरुको कानून छ कि सम्पत्तिहरुलाई न्याय बाट छुट दिन्छ। साथै, केहि क्षेत्रहरूले यी खाताहरूमा लगानी गर्नेहरूको लागि गोपनीयताको राम्रो सम्झौता प्रदान गर्न सक्दछन्। स्वाभाविक रूपमा, कानूनले एक उनको वा उनको आफ्नै देशको कानून पालन गर्न बाध्य गर्दछ।
अफशोर सम्पत्ति संरक्षण
सम्पत्ति सुरक्षा कहिलेकाँही केहि फारमहरू लिन्छ। जबकि त्यहाँ धेरै किनारा विकल्पहरू छन्, अफशोर वाहनहरू प्रायः सम्पत्ति संरक्षणको लक्ष्यका लागि अधिक प्रभावकारी हुन्छन्। विशेष रूपमा, अफशोर ट्रस्ट सम्पत्ति सुरक्षामा अत्यधिक प्रस्ताव गर्दछ। र सम्झनुहोस्, यदि तपाईं यो मार्ग लिने बारेमा सबैमा दोषी महसुस गर्नुहुन्छ भने, नगर्नुहोस्। जे भए पनि, यो तपाईंको सम्पत्ति हो जुन हामी कुरा गर्दैछौं — तपाईंले प्राप्त गर्न कडा मेहनत गर्नुभयो।
जान्नुहोस् कि यसको मूलमा, सम्पत्ति सुरक्षा जोखिम प्रशासन बाहेक अरु केहि छैन। यो एक बीमा नीति खरीद को जस्तै छ; र सामान्यतया धेरै अधिक सुरक्षात्मक र लागत प्रभावी। यदि तपाईं आज व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईं बुझ्नुहुन्छ कि मुनाफा कमाउन कत्ति गाह्रो हुन्छ। यसैले, दुर्ग निर्माण गर्नु दुबै तपाईंको श्रमको फलहरू बचाउँदछ र तपाईंलाई पैसा बचत गर्दछ सायद एक बुद्धिमान युक्ति हो।
यदि तपाइँ एक भन्दा बढि व्यवसाय चलाउनुहुन्छ भने तपाईले एउटा व्यवसायबाट आउने दावीलाई अरुको जोखिम लिन चाहनुहुन्न। त्यस्तै, तपाइँ प्रत्येक व्यवसायको लागी एकल इकाईको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ। यस दृष्टिकोणले प्रत्येक व्यवसायलाई यसको आफ्नै व्यक्तिगत घन प्वाल पार्दछ। यस तरीकाले, एउटा उद्यमको बिरूद्धमा मुद्दा हाल्दा तपाइँको सम्पूर्ण साम्राज्यलाई चल्दैन। थप रूपमा, तपाईं आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षा रणनीतिको शक्ति अधिकतम जब तपाईं यस्तो विदेशमा गर्नुहुन्छ। त्यसोभए, अपतटीय सम्पत्ति सुरक्षाको लागि तपाईका विकल्पहरू के हुन्?
नेविस र सम्पत्ति संरक्षण
नेभिस सम्पत्ति सुरक्षा र गोपनीयता कानून प्रस्ताव गर्न आधुनिक समयको पहिलो अपतटीय हेभन्स मध्ये एक थियो। बहुविध व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने जोखिमलाई सन्तुलनमा राख्ने यो एक तरिका हो। नेविसमा कम्पनीहरूले लुकेका आक्रमणहरू पनि रोक्न सक्दछन् जुन बेइमान वकिलहरूबाट आउँदछ। कम्पनी गठन सेवा प्रयोग गरी, जस्तै यो एक, तपाईं एक अपतटीय व्यवसाय सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ। एक अपतटीय ट्रस्टको साथ संयोजन र / वा विश्वभरि विभिन्न न्यायालयहरूबाट अपतटीय फाउन्डेशनले विश्वव्यापी प्रतिबन्धहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ।
विज्ञहरू प्राय: नेविस अफशोर व्यवसायहरूको सिफारिस गर्छन् किनकि तिनीहरूको कानूनले गोपनीयता र सम्पत्ति सुरक्षाको पक्ष लिन्छ। नेभिस LLC, यस लेखन को रूप मा, कुनै पनि अपतटीय कम्पनी को सबै भन्दा प्रभावी सम्पत्ति सुरक्षा कानून प्रदान गर्दछ।
यहाँ केहि कारणहरू छन् नेविस एलएलसी (विशेष गरी जब नेभिस ट्रस्टसँग जोड्दछ) एक उत्कृष्ट सम्पत्ति सुरक्षा उपकरण हो:
नेभिस LLC मा आफ्नो सदस्यता ब्याजको बिरूद्ध फैसलाको लागि मुद्दा दायर गर्नु अघि एकजनाले १०,००,००० डलरको बोन्ड राख्नु पर्छ।
कपटपूर्ण स्थानान्तरण सीमाको विधान मात्र दुई बर्ष हो। यसको मतलब यो छ कि जब तपाईले नेभिस LLC मा सम्पत्ति राख्नुहुन्छ, दुई बर्ष पछि, नेविसले अदालतले सुनुवाइ गर्दैन।
यसको शीर्षमा, लेनदेनकर्ता एक व्यावहारिक शंका भन्दा पर प्रमाणित गर्न आवश्यक छ नेभिस LLC को मालिक लेनदारबाट सम्पत्ति राख्न LLC कोष।
सम्पत्ति सुरक्षा जसले एक लेनदारलाई कब्जाबाट जोगाउँदछ कम्पनी वा यसमा सम्पत्ति बहु-सदस्य LLCs को अतिरिक्त एकल-सदस्यलाई प्रदान गरिएको छ।
यदि एक चार्जिंग अर्डर प्राप्त गर्दछ भने, यो तीन वर्षमा समाप्त हुन्छ र लेनदेनकर्ता यसलाई नविकरण गर्न सक्दैन।
नेभिस एलएलसी भन्दा पनि शक्तिशाली नेभिस सम्पत्ति सुरक्षा हो। यसलाई अझ कडा शब्दहरूमा राख्नु नेविस ट्रस्ट संसारमा सबैभन्दा प्रभावी सम्पत्ति सुरक्षा उपकरण मध्ये एक हो। जब एक अमेरिकी अदालतले "पैसा फिर्ता गर्ने" भन्यो अफशोर ट्रस्टीले भने, "माफ गर्नुहोला, तपाईको यहाँ क्षेत्राधिकार छैन।" जब हामी नेविस ट्रस्ट स्थापना गर्दछौं हामी नेभिस LLC भित्र राख्छौं। त्यस समय, ग्राहक LLC को प्रबन्धक हो जब समय राम्रो हुन्छ। त्यसोभए जब ऊ वा उनी कानुनी हमलाको सिकार हुन्छन्, ट्रस्टी (नेभिसमा हाम्रो कानून फर्म) ले प्रवेश गर्न सक्छ र सम्पत्ति सुरक्षा किल्ला सक्रिय गर्न सक्छ।
बेलीज र सम्पत्ति संरक्षण
बेलीजले अपतटीय कम्पनी गठन र अफशोर बैंकिंग प्रस्ताव गर्दछ। नेभिस पछि, यो सम्पत्ति सुरक्षा र गोपनीयता को लागी एक उत्तम विकल्प हो। "बेलिज एउटा देश हो जहाँ म मेरो पैसा लुकाउन जान्छु र बाँच्न चाहन्छु भने बाँच्न," एफबीआईको वित्तीय अपराध शाखाका पूर्व प्रमुख डेनिस लोर्मेलले भने। "तथ्य यो हो कि म त्यहाँ सुरक्षित हुनेछु, र (युएस) सरकारले मलाई हस्तान्तरण गर्न वा मेरो बैंक खातामा प्रवेश गर्न सक्षम हुने छैन।" स्वाभाविक रूपमा, यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं एक धेरै वैध, कानूनी उद्देश्यको लागि अपतटीय बैंकिंग प्रयोग गर्नुहोस्।
नेभिस पछि, तपाइँ बेलिज एलडीसी संग संयुक्त बेलीज विश्वास विश्वव्यापी रूपमा दुई अधिक शक्तिशाली सम्पत्ति सुरक्षा उपकरणहरू हुन्। यहाँ छ।
ठूला योगदानहरू (एलडीसी स्थापना गर्न योगदान दिएका कोषहरू) लेनदेनकर्ताको जालसाजी स्थानान्तरण दावीबाट छुट छ।
बेलीज एलडीसीको लागि जालसाजी वाहेकमा सीमितताको विधान धेरै छोटो छ। यो केवल एक वर्ष यसको स्थापित र वित्त पोषण बाट वा सम्पत्ति यसमा स्थानान्तरण भएको दुई वर्ष पछि मात्र हो।
बेलीज ट्रस्टको त्यस्तै फाइदा छ र एलडीसी भन्दा बढि शक्तिशाली छ। सामान्यतया हामी भित्र एउटा बेलीज ट्रस्ट सेट अप गर्दछ बेलीज LDC भित्र। नेभिस एलएलसीको साथ, ग्राहक बेलिज एलडीसीको प्रबन्धक हो जबसम्म "खराब चीज" हुँदैन। त्यसोभए जब एक लेनदेनको हमला हुन्छ, बेलीज ट्रस्टे भित्र जान्छ र सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्दछ। तपाईको स्थानीय अदालतको बेलिज ट्रस्टीहरु को क्षेत्राधिकार छैन। त्यसोभए, तिनीहरू ट्रस्टीलाई पालना गर्न बाध्य गर्न सक्दैनन्।
बेलीज ट्रस्टको लागि जालसाजी ट्रान्सफरमा सीमितताको विधान जति छोटो छोटो छ। सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया वा पैतृक सम्बन्धी दावीले सीमितताको विधान शून्य हो। त्यो हो, कि कसैले एक यस्तो सम्पत्ति को ट्रस्ट मा हस्तान्तरण छ रूपमा, भरोसा तिनीहरूलाई रक्षा गर्दछ।
तपाईंको सम्पत्तिलाई जोगाउँदै
बेइमान वकिल दावीबाट तपाईंको सम्पत्ति इन्सुलेट गर्न, तपाईंले आफ्नो जोखिम र तपाईंको सम्पत्तीको मूल्य र प्रकारको मूल्या to्कन गर्न आवश्यक छ। अफशोर वित्तीय योजनाले विकल्पहरूको एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ जुन घरेलु रूपमा उपलब्ध छैन। सुरुमा, तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई जोगाउन कुनै उन्नत योजना सुरू गर्नुभन्दा पहिले यहाँ के गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम, तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंसँग एक ठूलो, ठोस सम्पत्ति सुरक्षा आधार छ।
अनिवार्य रूपमा, तपाईंले उचित कानुनी उपकरणहरूमा सम्पत्तिहरू राख्नु पर्छ। यसका अतिरिक्त, तपाईले उचित अधिकार क्षेत्र चयन गर्नुपर्नेछ इच्छित सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि। तपाईं यी कानुनी उपकरणहरू बीचमा रहेको बैंकराहरूमा आफ्नो सम्पत्ति विविधिकरण गर्न सक्नुहुनेछ जुन विदेशी निर्णयहरूलाई मान्यता दिदैन। यो स्थापना गर्न एकदम सीधा र छिटो हो। थप रूपमा, त्यसो गरेर तपाईं आफ्नो सम्पत्ति र पहिचानको रक्षा गर्न सक्नुहुनेछ जब अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार सञ्चालन गर्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि यी तपाईंको इच्छाहरू हुन् र हामी तपाईंलाई कसरी देखाउने छौं।
यो कुक टापु विश्वास or नेविस ट्रस्ट ट्रस्ट भित्र एक अपतटीय LLC साथ संयुक्त राम्रो संयोजन हो। माथि उल्लेख गरिए अनुसार, जब अमेरिकी अदालतले तपाईंको पैसा फिर्ता ल्याउने मांग गर्दछ, हाम्रो अफशोर कानून फर्म पालन गर्न अस्वीकार गर्न सक्दछ।
वित्तीय संरक्षणको लागि छाया कम्पनीहरू
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, द ट्रिबुन-समीक्षाले उल्लेख गर्‍यो कि विश्वका सबै वाणिज्य को fifty० प्रतिशत कर हेभनहरु मार्फत लाग्छ। एक कर अफगान बैंकिंगमा हेवन दृष्टिकोणले एक कम्पनीको नाममा निजी बैंक खाता प्राप्त गर्दैछ। त्यस्तै, यसले कसैबाट पैसा बचत गर्छ तपाईबाट पैसा राख्न चाहानुहुन्छ। यसले लेनदारहरू, वकिलहरू, पूर्व पति वा पत्नी, वा अन्य वित्तीय गिद्धहरू समावेश गर्न सक्दछ।
"अज्ञात कम्पनी हुनु भनेको सम्पूर्ण गतिविधिहरुका लागि उपयोगी छ, र अज्ञात कम्पनी प्राप्त गर्नु धेरै सजिलो छ," अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ युनिभर्सिटीमा एक अफशोर बैंकिंग शैक्षिक जेसन शर्मनले भने। कम्पनी बनाउने छिटो र सजिलो हुन सक्छ। वास्तवमा, यो हाम्रो विशेषता हो र कार्यदिवसको दौरान, हाम्रो फर्मले दैनिक आधारमा अफशोर कम्पनीहरूको गठन गर्दछ। तपाईंको अफशोर कम्पनीको लागि अफशोर बैंक खाता प्राप्त गर्न केहि समय र प्रयास लिन सक्दछ। त्यसोभए कसैसँग मद्दत लिनुहोस् जोसँग उद्योगमा अनुभव छ। फेरि, यो केहि चीज हामी दैनिक गर्दछौं - ग्राहकहरूलाई अपतटीय खाताहरू खोल्न सहयोग गर्दै। जब तपाइँले उही गर्नुहुन्छ, तपाइँ आफैंलाई यो धेरै सार्थक पाउनुहुनेछ जब यो एक वित्तीय आक्रमणबाट आफूलाई जोगाउन आउँछ।
केही अपतटीय बैंक खाताहरू आफ्नो सुरु निक्षेपहरूको लागि मात्र दुई हजार डलर आवश्यक छ। अरूहरू, विशेष गरी स्विस बैंक खातालाई फन्ड गर्न पैसाको उचित मात्रा चाहिन्छ। स्विस बैंकिंग खाता खोल्न प्राय: $ २,250,000,००० देखि million १ लाख सम्म आवश्यक पर्दछ।
सम्पत्ति सुरक्षाको लागि अफशोर ट्रस्टहरू
अफशोर सम्पत्ति संरक्षण योजना विगतका केही वर्षहरूमा विवादहरूको विषय भएको छ। सब भन्दा उत्तम सम्पत्ति संरक्षण योजना एक अपूरणीय भरोसा बनाउनु हो जुन भेट्ने विशेष शक्ति हुन्छ। यो किनभने कानूनले ट्रस्ट सम्पत्तिलाई सेटलरको सम्पत्तिको रूपमा लिदैन। दिमागमा राख्नुहोस्, जब तपाईं ट्रस्ट खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईं केवल ट्रस्ट किन्नुहुन्न। थप रूपमा, तपाईले लिखित विश्वासको व्यक्तिगत व्यक्तिको अनुभव खरीद गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाइँलाई बचाउनको लागि, एक पेशेवरले यसलाई राम्रोसँग ड्राफ्ट गर्नुपर्दछ दुबै कानून र वास्तविक केस कानूनको अनुभवको आधारमा। त्यसोभए यो आफैले गर्ने काम होइन। मद्दत लिनुहोस्। सबै पछि, यो तपाईंको पैसा हो। त्यहाँ न्यासाहरूको धेरै रूपहरू छन्। प्रत्येक प्रकारको विशिष्ट उद्देश्य वा लक्ष्य हुन्छ।
एक अपतटीय भरोसा बस बस तपाइँको सम्पत्ति को रक्षा गर्न को लागी तपाइँको सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ। वास्तवमा हामीले अफशोर ट्रस्टलाई सब भन्दा बलियो उपलब्ध उपकरण फेला पार्‍यौं।
व्यक्ति अपतटीय ट्रस्टहरू सामान्य लेनदेनलाई बेवास्ता गरेर अधिकको लागि प्रयोग गर्दछन्। उदाहरण को लागी, तिनीहरू यो काम कसैको लागि कामदार क्षतिपूर्ति मामला मा आफ्नो धन ण लिन को लागी को लागी गर्छन्। हामी तिनीहरूलाई तपाईंको कार बचाउनका लागि बेइमान वकीलहरू, तपाईंको बीमा कभरहरू भन्दा अधिक क्षति गर्ने आग, आदिबाट बचाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं।
अन्य सम्पत्ति सुरक्षा प्रविधिको जत्तिकै, मुद्दा चलाउन अघि काम गर्न भरोसा राख्नु उत्तम हो। यस तरिकाले, यो तपाईंलाई उत्तम सुरक्षा गर्न सक्षम छ। हो, तपाईं यसलाई एक पोस्ट-मुकुट किल्लाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर पूर्व योजना आदर्श छ। एक अपतटीय ट्रस्ट, यस उद्देश्यको लागि, सम्पत्ति सुरक्षा ट्रस्टको रूपमा ड्राफ्ट गरियो। त्यो हो, अन्तिम उद्देश्य तपाईंको सम्पत्ति सुरक्षित गर्नु हो।
अफशोर ट्रस्टहरूले सम्पत्ति संरक्षण योजनाको अवसरहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछन्, तपाईं यो विकल्प बुद्धिमानीपूर्वक पहुँच गर्नुपर्छ। तपाईंले निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंको प्रदायकसँग अनुभव छ र ट्रस्ट सही ढंगले ड्राफ्ट गर्नुहोस्। यसका साथै ट्रस्टीसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध राख्ने संस्थाले यसको निर्माणको लागि निर्देशन दिनुपर्दछ।
एक संयुक्त लेखा लाई स collecting्ग्रहण गर्नबाट रोक्न एक विश्वव्यापी ट्रस्टमा संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहिर सम्पत्ति स्थानान्तरण हुन सक्छaधोखाधडी वाहक। यद्यपि यो केवल एक नागरिक मामला हो जसमा सामान्यतया कुनै आपराधिक परिणाम हुँदैन। यस वाक्यांशको लागि उत्तम शब्द भनेको "अस्थिर लेनदेन" हो। वास्तवमा यो यथार्थ वाक्यांश हो जुन एकरूप विधि आयोगले प्रयोग गर्दछ। यो किनभने यो शब्द हो धोखाधडी अज्ञात सोचाइमा डो lead्याउँछ जुन वास्तवमै यो भन्दा गम्भीर हो।
अफशोर बैंकिंग कर कानूनहरू
सामान्यतया, अपतटीस लगानी खाताहरूको यी प्रकारहरु संग एक पकड छ। त्यो सुनिश्चित गर्न संयुक्त राज्यको "कर हेवन" कानून को पालना गर्न को लागी छ। यी कानूनहरूमा यस्तै चीजहरू गर्न निश्चित गर्नु समावेश गर्दछ:
आईआरएसमा कुनै पनि सम्पत्ति स्थानान्तरण विदेशी ट्रस्टमा रिपोर्ट गर्दै।
एक अमेरिकी द्वारा प्राप्त अफशोर ट्रस्टबाट वितरण सम्भवतः त्यस व्यक्तिको लागि कर लगाउन सकिन्छ।
सबै अविनिश्चित आयहरु आयको रूपमा कर लगाउन सकिन्छ।
एक अपतटीय ट्रस्टमा कुनै संचित आयको लागि खाता जुन अघिल्ला बर्षहरूमा उत्पन्न गरिएको हुन सक्छ। अन्यथा, वितरणले अमेरिकी ती वर्षहरूमा आयकर तिर्न सक्छ। यो केवल पछिल्लो वर्षहरूमा कमाएको आय जस्तै हो। यदि आय पहिले रिपोर्ट गरिएको थिएन भने, तपाईंले दुबै दण्ड र ब्याज तिर्नु पर्ने हुन सक्छ। तल्लो रेखा हो कि अपतटीय आय कर तटस्थ छन्। तपाईले करहरुमा अधिक वा कम भुक्तान गर्नुहुन्न यदि तपाइँ तपाइँको रकम अपतटीय वा onshore होल्ड।
IRS ले तपाईंलाई (वा तपाईंको सीपीए) एक साधारण कर फाराम फाइल गर्न भन्नेछ। फारमले ट्रस्टको भित्री सम्पत्तिको मूल्य स्पष्ट गर्दछ। थप रूपमा, तपाईं ट्रस्टको वास्तविक लाभार्थीहरूको नाम राख्नुहुनेछ। यदि तपाईं यो रिपोर्ट फाइल गर्न असफल हुनुभयो भने तपाईंले अन्य चीजहरूको एक जुर्माना कमाउन सक्नुहुनेछ, $ १००० लेट शुल्क। यदि तपाईं समग्रमा रिपोर्ट फाइल गर्न असफल हुनुभयो भने, यो झनै बढि कठिन हुन सक्दछ। त्यसोभए, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लेखाकार पूरा छ र समय मा सरल फारामहरू फाइल गर्नुहोस्।
अर्को शब्दहरुमा, IRS ले मतलब गर्दैन यदि तपाईं एक अपतटीय खाता छ। एक अपतटीय खाता भएकोले "रातो झण्डा" उठाउँदैन, जस्तो कसैलाई गलत विश्वास छ। तिनीहरू केवल ख्याल गर्छन् कि तपाईं आफ्नो आय रिपोर्ट। चाहे तपाइँ एक मुनाफा श्याम वा अपतटीय कमाउन सक्नुहुन्छ, रिपोर्ट गर्नुहोस् तपाइँ के कमाउनुहुन्छ। त्यसोभए, यो अपतटीय वा ओन्शोर होईन जुन आईआरएसको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसले तपाईंको आयलाई रिपोर्ट गर्दैछ कि फरक पार्दछ जहाँ ती आयहरू कहाँ हुन्छन्।
अफशोर कर्पोरेट र ट्रस्ट कर सल्लाहहरू
त्यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कर सल्लाहहरू छन् जुन तपाईंलाई अनुदानदाता, हस्तान्तरणकर्ता वा विदेशी सम्पत्तिको कार्यकारीको रूपमा सचेत हुनुपर्दछ। ती व्यक्तिहरूले वैदेशिक न्यासमा सर्ने सम्पत्तिका साथै अमेरिकी ट्रस्टका अमेरिकी लाभार्थीहरूलाई निम्न सूचनाहरू थाहा हुनुपर्दछ। त्यस्तै, यदि तपाईं आफ्नो विदेशी सम्पत्ति एक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा राख्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ तपाईंले जान्नु आवश्यक अन्य चीजहरू छन्। विशेष गरी, उचित कार्य लिनुहोस् यदि तपाईं तलका कुनै पनि कोटीहरूमा पर्नुभयो भने:
तपाईं एक अपतटीय निगम को १०% वा अधिकको स्वामित्वमा सेयरधारक हुनुहुन्छ। थप, कर्पोरेसनको आधा भन्दा बढी शेयरसँग पाँच वा कम अमेरिकी मालिकहरू छन्।
पाँच वा कम अमेरिकीहरू तपाईंको अफशोर कम्पनीको स्टकको साथ शामिल छन्। थप रूपमा, company's०% र माथीको कम्पनीको आय लगानीबाट हो।
तपाईंसँग एकको शेयरधारक नियन्त्रण छ अपतटीय कम्पनी investment०% वा बढी सम्पत्तिहरू लगानी सम्पत्तिको रूपमा होल्ड गर्दै। थप रूपमा, तपाईं समान लगानी आयको साथ कुल आयको income 50% र माथि बनाउँदै हुनुहुन्छ।
के माथिका कुनै पनि सत्य छन्? यदि त्यसो हो भने, तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत कर रिटर्नमा आम्दानी रिपोर्ट गर्न निश्चित हुनु आवश्यक छ। त्यसोभए, सीपीएसँग परामर्श गर्न नबिर्सनुहोस् जो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका साथ अनुभवी छन्। यस क्षेत्रका जानकार सीपीए धेरै जसो धनी व्यक्तिहरूको संख्या बढी भएका ठूला शहरहरू हुन्। तपाईको मैत्री छिमेकी सीपीए बुगटसलबाट, केन्टकी सम्भवतः उनको टाउको माथि हुनेछ। तपाईं अझै पनि आफ्नो आधारभूत फाइलिंग को लागी आफ्नो स्थानीय केटा वा ग्याल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर अपतटीर फाइलिंगका लागि, क्षेत्र जान्ने कोहीलाई प्राप्त गर्नुहोस्।
स्पष्ट रूपमा, तपाईंले आफ्नो आँखा खुला खुला एक अपतटीय सम्पत्ति सुरक्षा ट्रस्ट सेट अप गर्नुपर्छ। यसले लेनदारको पहुँच बाहिर आफ्नो सम्पत्ति राख्न एक तरिका प्रदान गर्दछ। त्यसोभए, स्मार्ट योजना बनाएर, र व्यक्तिगत कर फाईलिंगहरूमा जागरूकताको साथ, तपाईं सही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईं बेइमान वकिलबाट तपाईंको सम्पत्ति लुकाउन सक्नुहुन्छ। केवल आश्वासन दिनुहोस्, कानुनी खतराबाट आफूलाई जोगाउन प्रभावकारी र शक्तिशाली तरिकाहरू छन्। अन्य धेरै नियमित व्यक्तिहरू हरेक दिन त्यसो गर्छन्।
डा। क्रिस्टी नेल्सन